Vaovao - Ny fitantanan-draharaha Baker-Polito dia nanambara ny famatsiam-bola ho an'ny teknolojia vaovao ao amin'ny zavamaniry fitsaboana rano maloto
Baker-Polito Administration dia nanambara famatsiam-bola ho an'ny teknolojia vaovao amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto
Ny Baker-Polito Administration dia nanolotra vola $ 759.556 androany hanohanana ny fandrosoana ara-teknika enina amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto any Plymouth, Hull, Haverhill, Amherst, ary Palmer. Ny famatsiam-bola, natolotra tamin'ny alàlan'ny programa Pilot Wastewater Fitsaboana rano maloto an'ny Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC), dia manohana ireo distrika sy tompon'andraikitra amin'ny rano maloto ampahibemaso any Massachusetts izay mampiseho teknolojia fitsaboana rano malala vaovao mampiseho ny mety hampihenana ny angovo angovo, hamerenana ireo loharano toy ny hafanana, biomass, angovo na rano, ary / na otrikaina fanarenana toy ny azota na fosforôra.
"Ny fitsaboana ny rano maloto dia dingana iray miasa mafy amin'ny angovo, ary manolo-tena izahay hiara-hiasa akaiky amin'ireo tanàna manerana ny Commonwealth hanohana ireo teknolojia vaovao izay mitarika fotodrafitrasa madio sy mahomby kokoa," hoy ny governora Charlie Baker. "Massachusetts dia mpitondra nasionaly amin'ny fanavaozana ary manantena ny hamatsy vola ireo tetik'asa rano ireo izahay hanampiana ny vondrom-piarahamonina hampihena ny fampiasana angovo ary hampihena ny vidiny."
"Ny fanohanana ireo tetik'asa ireo dia hanampy amin'ny fampivoarana ireo teknolojia vaovao izay hanatsara ny fizotran'ny fitsaboana rano maloto, izay iray amin'ireo mpanjifa herinaratra lehibe indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamoninay," hoy ny lietnà governora Karyn Polito. "Faly ny mpitantana anay manome fanampiana stratejika an'ireo tanàna hanampiana azy ireo hiatrika ny fanamby amin'ny rano maloto ary hanampy ny Commonwealth hitahiry angovo."
Ny famatsiam-bola ho an'ireto programa ireto dia avy amin'ny MassCEC's Renewable Energy Trust izay noforonin'ny mpanao lalàna tao Massachusetts tamin'ny 1997 ho ampahany amin'ny fanafoanana ny tsenan'ny fampiasana herinaratra. Ny fahatokisana dia vinan'ny fiampangana tombotsoam-bola aloa amin'ny alàlan'ny mpanjifa herinaratra Massachusetts an'ny orinasa manana mpampiasa vola, ary koa ny sampana herinaratra monisipaly izay nisafidy ny handray anjara amin'ilay programa.
"Massachusetts dia manolo-tena hihaona amin'ny tanjona kendrena hampihenana ny entona etona ary ny fiaraha-miasa amin'ireo tanàna sy tanàna manerana ny fanjakana hanatsarana ny fahombiazan'ny fizotran'ny rano maloto dia hanampy antsika hahatratra ireo tanjona ireo," hoy ny sekretera misahana ny angovo sy ny tontolo iainana, Matthew Beaton. "Ireo tetik'asa tohanan'ity programa ity dia hanampy amin'ny fizotran'ny fitsaboana ny rano maloto mampihena ny fampiasana angovo ary manome tombony ny tontolo iainana ho an'ireo vondrom-piarahamonintsika."
"Faly izahay manome an'ireto vondrom-piarahamonina ireto loharano hitrandrahana teknolojia vaovao izay sady mampihena ny vidin'ny mpanjifa no manatsara ny fahombiazan'ny angovo," hoy ny tale jeneralin'ny MassCEC, Stephen Pike. "Ny fitsaboana ny rano maloto dia maneho fanamby maharitra ho an'ireo tanàna ary ireo tetik'asa ireo dia manome vahaolana mety ary manampy ny Commonwealth hanangana eo amin'ny toerany amin'ny maha-mpitondra firenena amin'ny fahombiazan'ny angovo sy ny teknolojia momba ny rano."
Ireo manam-pahaizana momba ny sehatry ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana Massachusetts dia nandray anjara tamin'ny fanombanana ireo tolo-kevitra ary nanolotra ny heviny momba ny haavon'ny fanavaozana atolotra sy ny fahombiazan'ny angovo mety ho tanteraka.
Ny tetikasa tsirairay omena dia fiaraha-miasa eo amin'ny tanàna sy ny mpanome teknolojia. Ny programa dia nanangona famatsiam-bola 575 406 $ fanampiny avy amin'ireo tetikasa enina mpanamory fiaramanidina.
Ireto tanàna sy mpanome teknolojia manaraka ireto dia nahazo famatsiam-bola:
Seranam-piaramanidina monisipaly Plymouth sy fiarovana ny tontolo iainana JDL ($ 150,000) - Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hametrahana, hanaraha-maso ary hanombanana ny reactor fitsaboana rano maloto biolojika membrane kely ao amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto any amin'ny seranam-piaramanidina.
Tanànan'i Hull, AQUASIGHT, ary Woodard & Curran ($ 140,627) - Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hanatanterahana sy hitazonana ny sehatry ny tsikombakomba artifisialy, fantatra amin'ny anarana hoe APOLLO, izay mampahafantatra amin'ny mpiasa rano maloto ny olana sy ny hetsika mety hampitombo ny fahombiazan'ny asa.
Tanànan'i Haverhill sy AQUASIGHT ($ 150,000) - Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hanatanterahana sy hitazomana ny sehatra fisoloan-tena artifisialy APOLLO ao amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto any Haverhill.
Tanànan'i Plymouth, Kleinfelder ary Xylem ($ 135,750) - Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hividianana sy hametrahana fantsom-panafody optika novolavolain'i Xylem, izay ho fitaovana voalohany amin'ny fanaraha-maso ny fanesorana ireo otrikaina.
Tanànan'i Amherst sy Blue Thermal Corporation ($ 103,179) - Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hametrahana, hanaraha-maso ary hanokafana paompy hafanana rano maloto, izay hanome hafanana, fampangatsiahana ary rano mafana azo havaozina sy tsy miovaova ho an'ny Fambolena Amherst Wastewater avy amin'ny loharano azo havaozina.
Tanànan'i Palmer sy The Water Planet Company ($ 80,000) - Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hametrahana rafitra fanaraha-maso aerôlika mifototra amin'ny azota miaraka amin'ny fitaovan'ny santionany.
"Ny reniranon'i Merrimack dia iray amin'ireo harena voajanahary lehibe indrindra an'ny Commonwealth ary ny faritra dia tsy maintsy manao izay azony atao mba hiantohana ny fiarovana an'i Merrimack mandritra ny taona maro." hoy ny senatera fanjakana Diana DiZoglio (D-Methuen). "Ity fanampiana ity dia hanampy betsaka ny tanànan'i Haverhill amin'ny fampiasana teknolojia hampitombo ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny rafi-pitsaboana rano maloto. Ny fanavaozana ireo zavamaniry fanodinana rano maloto dia dingana iray lehibe hijerena ny fahasalamana sy ny fiarovana tsy ho an'ireo mponina mampiasa renirano ho fialamboly sy fanatanjahantena ihany, fa ho an'ny biby dia izay miantso ny Merrimack sy ny tontolo iainany. "
"Ity famatsiam-bola avy amin'ny MassCEC ity dia hahafahan'i Hull miantoka ny toeram-pitsaboana rano maloto ataon'izy ireo raha tsy misy olana eo amin'ny sehatry ny asa." hoy ny senatera fanjakana Patrick O'Connor (R-Weymouth). "Amin'ny maha vondrom-piarahamonina amoron-tsiraka anao, zava-dehibe ny fihodinan'ny rafitsika mahomby sy milamina."
“Faly izahay fa nifidy an'i Haverhill i MassCEC noho io fanomezana io,” hoy ny solontenam-panjakana Andy X. Vargas (D-Haverhill).“Manam-bintana izahay manana ekipa tsara ao amin'ny tranon'ny rano maloto any Haverhill izay nampiasa am-pahendrena ny fanavaozana hanatsarana bebe kokoa ny asam-panjakana. Feno fankasitrahana ny MassCEC aho ary manantena ny hanohanana hatrany ny fanohanana ireo hetsiky ny fanjakana izay manavao sy manatsara ny kalitaon'ny fiainana ho an'ireo mponina eto amintsika. ”
"Manohy ny laharam-pahamehana amin'ny famatsiam-bola sy ny haitao ny Commonwealth of Massachusetts hanatsarana ny kalitaon'ny rano amin'ireo renirano rehetra sy loharano fisotroan-tsika," hoy ny solontenam-panjakana Linda Dean Campbell (D-Methuen). "Miarahaba ny tanànan'ny Haverhill aho tamin'ny fampiharana ity haitao farany farany mahomby amin'ny fanatsarana ny fitsaboana rano maloto ity sy fanaovana an'io tanjona io ho laharam-pahamehana."
"Ankafizinay ny fampiasam-bolan'ny Commonwealth amin'ny vondrom-piarahamoninay hanitarana ny fampiasana ny teknolojia ao an-tanàna ho an'ny fahombiazan'ny asa, ary amin'ny farany ho an'ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny tontolo iainana. hoy ny solontenam-panjakana Joan Meschino (D-Hingham).
"Ny haitao artifisialy dia teknolojia tena mampanantena izay afaka manatsara ny fahombiazany sy ny asany," hoy ny solontenam-panjakana Lenny Mirra (R-West Newbury). “Izay rehetra azontsika atao mba hampihenana ny angovo angovo, ary koa ny fivoahan'ny azota sy fôsôro, dia fanatsarana lehibe eo amin'ny tontolo iainantsika.”
Fotoana fandefasana: Mar-04-2021